Blog ရေးသားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Blog ရေးသားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jul 23, 2011 in Computers & Technology | 14 comments
ကျွန်တော့်ရဲ့ http://anzartone.wordress.com/ ဆိုတဲ့ blog ကိုတော့ ဗဟုသုတ တွေ မျှဝေဖို့အတွက်ရော၊ ကျွန်တော့်အတွက် မှတ်စုစာအုပ် အနေနဲ့ပါ ရေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ blog ဆိုတာက website နဲ့ မတူပါဘူး။ ဘာတွေ ခြားနားသလဲ ဆိုရင် website က update လုပ်ပေးဖို့ သိပ်ပြီး မလိုအပ်ပေမယ့် blog ကတော့ နေ့စဉ် update မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် နှစ်ရက်ခြား သုံးရက်ခြား update လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သတင်းတွေကို၊ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ အကြောင်းကို ဆွေးနွေး ဝေဖန်ဖို့ blog တစ်ခုကို ထားလေ့ ရှိကြပါတယ်။
၁။ စာအရေးအသား စွမ်းရည် မြင့်တက်လာစေတယ်။
၂။ ဗဟုသုတ တွေလည်း တိုးလာစေတယ်။
blog မှာ ဘာပို့စ်တွေ တင်မလဲ ? ကိုယ့်ရဲ့ blog ဟာ နည်းပညာ ဦးစားပေး ရေးထားတယ်ဆိုရင် အခြား နည်းပညာ blog တွေဆီမှာ သွားပြီး ဖတ်ရမယ်။ အတုယူရမယ်။ ခိုးချတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ အဲဒီလို ဖတ်ရင်းနဲ့ပဲ knowledge တွေ တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးပွားလာစေပါတယ်။
၃။ ကိုယ့်ရဲ့ နာမည်ကိုလည်း လူသိများစေတယ်။ နာမည်ကျော်စေတယ်ပေါ့
၄။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိစေတယ်။
အပြည့်အစုံ ဖတ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာကို သွားပါဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ မသွားတော့ပါဘူးနော်….
နောက်ပိုင်း ရွာထဲမှာ ပညာရှိတွေများလာတယ်နော်
So interesting article this is!Thanks for sharing us.I’d like to know more about benefits of blogging.Please share us more.
ပိုက်ဆံ ရတဲ့ အနေအထား တစ်ခု ဆိုတာ ဖြစ်လာတော့မှာ မို့ 
မကြာမှီ မျှော် ……………. ။
Blogging လုပ်တာက ၂၁ ရာစုရဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေ စိတ်ဝင်စားလာတဲ့ နည်းပညာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေတုန်းက Blogging ဆိုတာက အင်တာနက်ကို အရူးအမူး စွဲလန်းတဲ့ သူတွေလောက်သာ စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက အင်တာနက် သုံးသူ တော်တော်များများက ချက်ဖို့လောက်သာ သုံးကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ခုလို ၂၁ ရာစုမှာတော့ ချက်နေတာက အဲဒီလောက် ရင်ခုန်စရာ မကောင်းတော့ဘူလေ။ ဒါပေမယ့် Google plus ထွက်လာတယ်။ ဒါကြောင့် Blogging နဲ့ Social Network တွေကြားမှာ အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေ လူးလားခေါက်ပြန် ဖြစ်တော့မှာတော့..အင်း..
ခြောက်မျက်နှာကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ဒီ့ နောက်ဆက်တွဲကလဲ windtalker (လေပါးစပ်လို့ ပြောရင် ရလားမသိ) က ရှင်းပြီးသား .. အကျိုး များများ ရှိပါတယ် လို့
အကျိုးရှိအောင်တော့ သုံးဖို့ လိုမယ် .. ရန်များမယ့် အကြောင်းအရာတွေ ရှောင်ပေါ့
သားသားပဲ ရေးထားတယ်လေ .. ပိုက်ဆံရမယ့် အနေအထားတခု ဖြစ်လာတော့မယ် ဆိုတာ
အဲဒီအချက်ကို ထောက်ခံလိုက်တာ ..
လေပါးစပ်လို့ ရေးလိုက်တာက ရယ်စရာလေး ဖြစ်ချင်လို့ရယ် … သားသားက ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ရေးတယ်ဆိုတာကို သိချင်လို့ အစဖော်ကြည့်တာ
အမ် သား က ဘယ်တုန်းက ရှင်းခဲ့တာလဲ ဟင် ဖွားသီတာစိုး
ဖွားစိုး ကွန်မင့် ကို နားမလည်ဘူးကော
windtalker ဆိုတာ နီကိုးလပ်ကေ့ရှ် ရဲ့စစ်ကား နာမည် ပါ ဗျာ
အဲဒီ့ ဇါတ်ကား ၊ ဇါတ်လမ်း ကို ကြိုက်လို့နာမည်ယူထားတာပါ
လေပါးစပ် တော့ မလုပ်ပါနဲ့ 
သားက ဗမာလို ပဲ တိုက်ရိုက်ပြန်ယူထားတာပါ
wind = လေ ၊ talker = ပြောသူ ။
မြန်မာမှာမဟုတ်သေးတာတော့သေချာတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာရေးနေရရင်ပျော်နေသူတွေအတွက်တော့ Blogဆိုတာလည်း ဆေးတစ်ပါးပဲမဟုတ်လား
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘလော့ဂ်တွေ ရေးရတာ အားတက်စရာပဲပေါ့။
blog ရေးသားခြင်းက money တွေကိုလည်း ရစေတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ပါလား..
အင်း ရစေတဲ့အပြင် money လည်း သောက်သောက်လဲကုန်စေပြီး ဘလော့ဂ်ရူးရောဂါလည်း စွဲကပ်သွားစေပါတယ်ဆိုတာလေးလည်း ထည့်ပြောပေးပါဦး ဆရာရယ်…
http://www.hlayamin.com နှစ်ခုနဲ့တင် ရူးနေတဲ့သူတစ်ဦး